ယောဘသည်မော်ကွန်း - ထို rayhab
တူရကီယောဘအား Joobl: ကြော်ငြာတွေကိုကားမောင်းသမား
တူရကီစီးပွားရေးအသင်း (Teo) ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမီးရထားလမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်ဝန်ဆောင်မှုဧည့်ခံအကြားအနည်းဆုံးမူလတန်းကျောင်းဘွဲ့ရ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှုထုတ်ဝေသောမျက်နှာပြင်ကျော်အများပြည်သူအလုပ်အကိုင်များအလုပ်အကိုင်များစေမည်။ IŞKURကျော်ထုတ်ဝေအလုပ်ရည်ညွှန်းကိုးကားယူပါလိမ့်မည် [ပို ... ]
အဆိုပါကန်ထရိုက်တာ KPSS 2019 / 1 အဆိုပါ Scope Center ကခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်!
တူရကီစက်ခေါင်းများနှင့်အင်ဂျင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Inc က (TÜLOMSAŞ) အရာရှိတဦးက web site ကို "https: //www.tulomsas.com.t" ဟုပြည်သူ့ဝန်ထမ်းရေးရာရွေးချယ်ရေးစာမေးပွဲအပေါ်ထုတ်ဝေသောကြေငြာချက်မှာတော့ (KPSS) 2019 / 1 အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းထံမှလိုအပ်သောအလယ်ပိုင်းတာဝန်ကျတဲ့စာရွက်စာတမ်းများအောက်တွင်ကြေငြာခဲ့သည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနေ့စွဲသြဂုတ်လ72019 အထိစာရွက်စာတမ်းလိုအပ်သည် [ပို ... ]
Bursa BURULAŞ 55 န်ထမ်းများ, ယာဉ်မောင်းနှင့် Booth စောင့်တပ်ဖွဲ့လက်ခံတွေ့ဆုံ
55 BURULAŞမှတဆင့် Teo ထုတ်ဝေသောကြေငြာချက်အရဝန်ထမ်းများအပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောရာထူးအတွက်လုပ်ပေးမယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ ဤတွင်ကစားသမားများနှင့်ဖြန့်ဖြူးသောအခြေအနေများ။ ဇူလိုင်လ 25 2019 တူရကီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှရောင်းချရန်အများပြည်သူလုပ်သားများနှင့်ဝန်ထမ်းများ၏ဝယ်ယူဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ဖြန့်ချိ [ပို ... ]
TÜVASAŞစုဆောင်းမှုကြော်ငြာထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ တူရကီအဆိုပါအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီအပေါ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည့်, ကြေငြာချက်အရအဆိုပါTÜVASAŞအတွင်းဝန်ထမ်းရှားပါးမှုနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကွဲပြားခြားနားသော pozison အတွက်ဧည့်ခံအပေါ် 26 န်ထမ်းများစေမည်။ ဝယ်ယူမှုအပေါ်ထုတ်ဝေသောကြေငြာချက်အရပုံမှန်အနေအထားကို၌နေသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းလျှောက်ထား [ပို ... ]
တူရကီ Wagon စက်ရုံ Teo ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုကတဆင့်အသစ်တစ်ခုကြော်ငြာဝယ်ယူမှုဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ဧည့်ခံ staffed အဆိုပါ 26 Wagon စက်ရုံလုပ်သားများမှတဆင့် Teo အားဖြင့်ကြေငြာချက်အရကျင်းပပါလိမ့်မည်။ အနည်းဆုံးအထက်တန်းကျောင်းဘွဲ့ရကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏စုဆောင်းမှုလျှောက်ထားလိုသော [ပို ... ]
တူရကီနှင့်တူရကီစက်ခေါင်းများနှင့်အင်ဂျင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Wagon အနည်းဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်း7စုဆောင်းမှုထုတ်ဝေသောကြေငြာချက်၏နယ်ပယ်အတွင်းအထက်တန်းကျောင်းဘွဲ့ရပြုမိပါလိမ့်မည်။ တူရကီ Wagon စက်မှုနဲ့တူရကီစက်ခေါင်းများနှင့်အင်ဂျင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအနည်းဆုံးအထက်တန်းကျောင်းဘွဲ့ရကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ [ပို ... ]
်ထမ်းခေါ်ယူမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အ TCDD 38 ၏ရက်စွဲများများအတွက်လျှောက်လွှာ
တူရကီပြည်နယ်မီးရထား TCDD, လူသိများသောတိုတောင်းအမည်, သမ္မတကတဆင့်ထုတ်ဝေနိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းရေးရာစုဆောင်းမှုကြော်ငြာသမ္မတနိုင်ငံ။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေစုဆောင်းမှုကြော်ငြာတွေ TCDD အဆိုအရ 38 န်ထမ်းတစ်ဦးစုစုပေါင်းကွဲပြားခြားနားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်းများများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများအတွက်အသုံးချခံရဖို့ [ပို ... ]
2019 / 1 KPSS အရပ်ဘက်အစေခံကျွန်ရယူခြင်းအထက်တန်းကျောင်းဘွဲ့ရ 13 အတွင်းတစ်ဦးကြေညာချက်တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအထွေထွေညွှန်ကြားမှု (TCDD) နဲ့ကို manual ကြိုက်တတ်တဲ့။ အဘယ်အရာကို TCDD 13 ဝန်ထမ်းများလိုအပ်ချက်များကို? KPSS နှင့်အတူ SSPC 2019 / 1 ထုတ်ဝေသည်ကို manual ပိုနှစ်သက် [ပို ... ]
အဆိုပါ KPSS ရမှတ်ပဋိညာဉ်စာတမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc မှစက်လုပ်သမားအလုပျသမားမြား၏ TCDD ညွှန်ကြားမှုမသက်ဆိုင်အဆိုပါဝယ်ယူမှု၏လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ 08.08.2019-09.08.2019 နေ့စွဲအတွက်စာရွက်စာတမ်းများပေးပို့သည့်İŞKURနေဖြင့်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်လိမ့်မည်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများစာရင်းကိုအပေါ်အရပျကိုယူပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများတင်ပြရမည်။ သူကားအဘယ်သူမွေးစားစာတမ်းများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုအပ် [ပို ... ]
မသန်စွမ်းဟောင်းယုံကြည်မှုများနှင့် TCDD ပို့ဆောင်ရေးအလုပ်သမားများတောင်းဆိုချက်များ
TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကအဆိုပါခံတွင်းစာမေးပွဲဖြေဆို join ဖို့အောက်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းမိတ္တူနှင့်အတူဖြန့်ချိဟောင်းပြစ်မှုထင်ရှားထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းနှင့်မသန်စွမ်းဧည့်ခံကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏နောက်ဆုံးစာရင်းထဲတွင်နေရာတစ်နေရာယူပါလိမ့်မယ်İSKUR KPSS ရမှတ်၏လျှို့ဝှက်ချက်များအားဖြင့်အသိပေးပါလိမ့်မည်, တာကနိုင်ငံတော်မီးရထားပို့ဆောင်ရေး Inc ကအထွေထွေညွှန်ကြားမှု [ပို ... ]
Make မှ 38 ဝန်ထမ်းရေးရာ kpss'siz TCDD
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံကထုတ်ပေးစုစုပေါင်းသစ်ကိုကြော်ငြာကိုဧည့်ခံအပေါ်338 န်ထမ်းလုပ်ပါလိမ့်မည်ကြေညာခဲ့သည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏သတင်း၏အဆက်အတွက်လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်နှင့်အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ကြော်ငြာအလုပ်သမားများစက်လုပ်သမားများ၏ဝယ်ယူမလိုဘဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ KPSS ရမှတ်၏ "ပဋိညာဉ်စာတမ်းညွှန်ကြားမှုအထွေထွေထုတ်ဝေ [ပို ... ]
တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏သမ္မတနိုင်ငံ (TCDD) နှင့်အလုပ်ခွင်မှ 356 အလုပ်သမားတွေအတွက် ISKUR အားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့စာရင်း, Teo, ကြေငြာခဲ့သည်ခံခဲ့ရသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ပါးစပ်စာမေးပွဲများ၏စာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်ပေးပို့သည့်နေ့စွဲထုတ်ပြန်ကြေညာတောင်ပံအတွက်သတ်မှတ်ထားသောလိုအပ်ချက်များကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ အလုပ်ခွင်ထဲမှာတူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏သမ္မတနိုင်ငံ (TCDD) [ပို ... ]
သစ်တစ်ခုနှင့်အမြဲတမ်းစုဆောင်းမှုကြေညာချက်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်မေတ္တာရပ်ခံစာရွက်စာတမ်းများနှင့်စုဆောင်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အခြေခံမူများ၏ list ကနေကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏အဆုံးစွန်အောင်မြင်မှုအတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ခြင်းဖြင့်တူရကီစက်ခေါင်းများနှင့်အင်ဂျင်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန (TÜLOMSAŞ) ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ တူရကီစက်ခေါင်းများနှင့် [ပို ... ]
တူရကီစက်ခေါင်းများနှင့်အင်ဂျင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကော်ပိုရေးရှင်းအထွေထွေညွှန်ကြားမှု (TÜLOMSAŞ)3စုစုပေါင်းအမြဲတမ်းဝန်ထမ်းကထုတ်ဝေတဲ့ကြော်ငြာကြေညာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းက3စုစုပေါင်းဝယ်ယူမှုအမြဲတမ်းလုပ်သားများကိုဖန်ဆင်းပါလိမ့်မည် "အဲဒီကြော်ငြာထဲမှာထုတ်ဝေသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုပ်သားများတရားစွဲဆိုများ၏အရေအတွက်နှင့်စပ်လျဉ်း, ခေါ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး [ပို ... ]
တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏သမ္မတနိုင်ငံ (TCDD), သစ်ကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးအစားထိုးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ 356 နေရာချထားကြေညာချက်၏စုဆောင်းမှုအားပေးပြီးမှခဲ့သည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်မှစာရွက်စာတမ်းများ, ဒါပေမယ့်အစားအစားထိုးကိုယ်စားလှယ်လောင်း Delivery သစ်ကိုအစားထိုးကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရာလာ [ပို ... ]
TCDD 356 အလုပ်သမားရေးရာချိန်းအစားထိုးကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရာထားရှိကြေညာချက်ထုတ်ဝေပြီးပါပြီ! 356 အခမ်းအနားအမည်ဟာပါးစပ်စာမေးပွဲအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏စုဆောင်းမှုဆုံးဖြတ်ရန်အလို့ငှာကျင်းပကျပန်းမဲနှိုက်ဖော်ပြထားတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့အညီတူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံ (TCDD), ဒါပေမယ့်ပိုပြီး [ပို ... ]
TCDD 356 ်ထမ်းခေါ်ယူမှုရလဒ်များကြေညာလိုက်သည်
အလုပ်အကိုင်စာချုပ်အားဖြင့် run ခံရဖို့ 169 သို့ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့အလုပ်ခွင် (အမြဲတမ်း) အလုပ်ခွင်ထဲမှာတူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) ၏သမ္မတနိုင်ငံအစဉျအမွဲကြာချိန်; ရထားဖွဲ့စည်းခြင်းအလုပ်သမား 86, 42 မီးရထားလမ်းပေါ်ရှိဆောက်လုပ်ရေး, ကို Maintenance နှင့်ပြုပြင်ရေးပစ္စည်းအော်ပရေတာ, 188 မီးရထားလိုင်း၏ကို Maintenance repair, [ပို ... ]
အလုပ်သမားများ၏ TCDD 356 Reception ကိုအာရုံစိုသည် Up ကိုဆောက်တက်ရောက်
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံအလုပ်ခွင်ထဲမှာ (TCDD) အစဉျအမွဲကြာချိန် (အမြဲတမ်း) ကအလုပ်အကိုင်စာချုပ်အားဖြင့် run ခံရဖို့; ရထားဖွဲ့စည်းခြင်းအလုပ်သမား 86, 42 မီးရထားလမ်းပေါ်ရှိဆောက်လုပ်ရေး, ကို Maintenance နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာအော်ပရေတာများကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီး, 188 ၏ကို Maintenance မီးရထားလိုင်း repair, 40 ဆိပ်ကမ်း crane [ပို ... ]
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ 356 အလုပ်သမားများပါဝင်လာအာရုံစူးစိုက်မှုအရစ်ကျသည် Up ကိုဆောက် TCDD ပါလိမ့်မယ်
1 စုစုပေါင်းစက်နည်းပညာနည်းပညာရှင်ကျော် Teo ထုတ်ဝေသောကြော်ငြာအတွက်တူရကီ Wagon စက်မှုဝန်ကြီးဌာန (TÜVASAŞ) မသန်စွမ်းစုဆောင်းရေးန်ထမ်းများအတွက်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ တစ်ဦးနည်းပညာရှင်အဖြစ်အလုပ်ရရန်အဖွဲ့အစည်း Wagon စက်မှုလက်မှုစက်နည်းပညာထုတ်ဝေသောကြော်ငြာအတွက်တူရကီကျော် Teo [ပို ... ]
TULOMSAS န်ထမ်းများဝယ်ယူအတွက်နယူး Developments!
တူရကီစက်ခေါင်းများနှင့်အင်ဂျင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Inc က အမြဲတမ်းစုဆောင်းမှုတို့အတွက်လျှောက်ထားသူအနေဖြင့်လိုအပ်သော website နှင့်စာရွက်စာတမ်းများပေါ်တွင်သစ်တစ်ခုအရာရှိတဦးကကြေငြာချက်အချို့ဖြစ်ခဲ့သည်ဖြန့်ချိခဲ့ကြသည်။ TÜLOMSAŞနေဖြင့်ဖြန့်ချိ DOCUMENT ထိန်းချုပ်ဖို့အဆုံးအဖြတ်အလုပ်သမားလျှောက်ထားသူစာရင်းကို Teo [ပို ... ]
TCDD အလုပ်သမားရေးရာချိန်းကိုးကားစရာနောက်ဆုံးနေ့အဘို့! အဘယ်အရာကိုစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ?
တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD), လျှောက်လွှာကိုယနေ့ကောက်ချက်ချအဆုံးသတ်ဆိုက်မှာအလုပ်ခံရဖို့ 356 စုဆောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ISKUR ပြုခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Teo ဘယ်လို application တစ်ခုရထားလမ်းလုပ်သားတွေရဲ့ဝယ်ယူဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ပါသလဲ။ ဘာဝန်ခံချက်လိုအပ်ချက်များကိုဧည့်ခံမှာ Teo TCDD န်ထမ်းများ [ပို ... ]
အများပြည်သူပုဂ္ဂိုလ်များစုဆောင်းမှု 40 8 ၏တူရကီစက်ခေါင်းများနှင့်အင်ဂျင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကော်ပိုရေးရှင်းအထွေထွေညွှန်ကြားမှု TULOMSAS application ကိုဧပြီလ 2019 ရက်စွဲပါတရားဝင်ပြန်တမ်းထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ပို့စ်တင်သည်။ လျှောက်လွှာအသေးစိတ်အရပ်ဘက်ကျွန်တို့ကန်ထရိုက်တာစုဆောင်းမှု။ အဆိုပါကန်ထရိုက်တာအထွေထွေညွှန်ကြားမှု [ပို ... ]
သူကားအဘယ်သူနိုင် TCDD 356 ်ထမ်းခေါ်ယူမှုလျှောက်လွှာ
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏စုဆောင်းမှုအဘို့အပလီကေးရှင်း 356 လည်းအခြေအနေအဘို့အရှာဖွေရေးအပေါ်တိုးမြှင့်သည့်အခါပြည်နယ်မီးရထား TCDD ၏တူရကီအထွေထွေညွှန်ကြားမှုသမ္မတနိုင်ငံအံ့သြစတင်ပါလိမ့်မည်။ ဒီတော့သူစုဆောင်းမှု 356 လျှောက်ထားနိုင်သလဲ ခွဲတမ်း TCDD Staffing ဖြန့်ဖြူး [ပို ... ]
တူရကီ TCDD အထွေထွေ 356 ဧပြီလအလုပ်သမားနှင့်ဝန်ထမ်းရေးရာစတင်!
TCDD န်ထမ်းများပြီးခဲ့သည့်လတွင်ဝယ်ယူမှုစေရန်စီမံချက်များထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ 356 ၏စုဆောင်းမှုနှင့်ဝန်ထမ်းများထွက်သယ်ဆောင်ရန်ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများတွင်အလုပ်ခွင်မှ KPSS မှတ်များ၏လိုအပ်ချက်မရှိဘဲ, ဤအခြေအနေတွင်အိမ်ခြံမြေ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုကြော်ငြာတွေထုတ်ဝေရန်အဘယ်သူသည်ပြည်နယ်မီးရထား။ ဧပြီလ၏လျှောက်လွှာ [ပို ... ]
Eskisehir အမှုဆောင်, ကုမ္ပဏီအတွင်းလုပ်ဖို့တာဝန်ပေးအပ်ခံရဖို့ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးကြီးများ၏အရေအတွက်ကိုစုဆောင်း, က Teo နည်းလမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်းနိုင်ငံသားများမှတင်ပြခဲ့သည်။ Eskisehir အတွက် operating စန်းအတွက် ESTRAM အလင်းရထားပို့ဆောင်ရေး။ နေကြပါပြီ။ ကုမ္ပဏီ၏ကုမ္ပဏီအတွင်း Eskisehir နယ်နိမိတ် [ပို ... ]
100 ဧည့်ခံအသိပေးစာထံမှ Havaist İSKURကားမောင်းသူပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာအလုပ်ခံရဖို့ Havaist 100 ကားမောင်းသူစုဆောင်းရေးİŞKUR'dan၏အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းခွဲပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းအတွင်းလည်ပတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွဲအမှတ်တံဆိပ် Havaist သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ကဖြစ်သောအစ္စတန်ဘူလ်ဘတ်စ်ကားကုမ္ပဏီ၏အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး [ပို ... ]
TCDD 2019 အဆက်မပြတ်အလုပ်သမားရေးရာချိန်းခံတွင်းစာမေးပွဲသည့်အခါ?
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအိမ်ခြံမြေများ (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှု, Teo ဇန်နဝါရီလအတွင်းအဆုံးသတ်ခဲ့သောအမြဲတမ်းစုဆောင်းမှုyaptı.xnumx TCDD 353 2019 ၏စုဆောင်းမှုထွက်ဘို့ applications များ။ ဒီတော့ TCDD စုဆောင်းမှုစာမေးပွဲဖြေဆိုပါးစပ်စာမေးပွဲဖြေဆိုသည့်အခါကျင်းပမညျနညျး တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) [ပို ... ]